Afak’omaly 7 Janoary rehefa nanatanteraka ny fisafoana toy ny andavan’andro fanaony ny polisy dia nahita rongony maniry tao amina tokantrano ao amin’ny fokontany Ambohijanaka, Atsimondrano. Noentina avy hatrany any amin’ny paositry ny polisy ireo olona miisa telo izay vehivavy ny iray nipetraka ao amin’ilay trano. Rongony miisa 20 fototra moa ity hita tao amin’ilay trano ity ary efa misokatra ny fanadihadiana mahakasika ity tranga ity. Betsaka ny mitady hevitra amin’ny rongony ity tato ato, azo heverina fa vola be ny varo-maizina zava-mahadomelina matoa manaotao foana hatramin’ny fianakaviana aza ka miara-midi-kizo toy izao. Ny lalàna mifehy azy ity, indrindra ny sazy efa tokony hampanarahana ny toetr’andro. Matetika mantsy ny fifehezana ny voninahitra sy ny seza amin’ny hika faran’ny teknolojia no hiazakazahana hanaovana lalàna fa lalàna mahakasika ny fandriampahalemana izay mihatra aman’aina noho ny fanafifan’ireo mpidoroka zava-mahadomelina tsy voajery.